Ibhegi yoMqulu yenza abavelisi kunye nababoneleli-ingxowa yokutyisa ingxowa yaseTshayina kwiFactory yokwenza
EUR Series Ngokupheleleyo oluzenzekelayo Roll-ukutya iBag Machine
Ukuzenzela ngokupheleleyo ibhegi yephepha esondla umqulu kunye nokwenza umqheba wentambo kunye nokuncamathela.Lo matshini wamkela i-PLC kunye nesilawuli esishukumayo, inkqubo yokulawula i-servo kunye ne-interface yokusebenza ngobukrelekrele ukuqonda imveliso yesantya esiphezulu kunye nokusebenza okuphezulu.Nge-Handle 110bags / min, ngaphandle kokubamba i-150bags / min.
YT-360 Roll feed Square Ezantsi Isingxobo Ukwenza Machine nge Inline Flexo Printing
1.NgeJamani yantlandlolo SIMENS KTP1200 isikrini somntu wekhompyuter, kulula ukuyisebenzisa kunye nokulawula.
I-2.eJamani i-SIMENS S7-1500T isilawuli sokuhamba, esidityaniswe ne-fiber optical profinet, qinisekisa umatshini ngesantya esiphezulu ngokukhawuleza.
3.EJamani SIMENS servo motor edityaniswe neJapan Panasonic yoqobo yoluvo lwefoto, ngokuqhubekayo ilungisa kancinci iphepha eliprintiweyo ngokuchanekileyo.
I-4.I-Hydraulic phezulu nasezantsi isakhiwo sokuphakamisa iwebhu, esidityaniswe nenkqubo yokulawula uxinzelelo oluqhubekayo.
5.Automatic Italy SELECTRA Web guider njengomgangatho, ngokuqhubekayo ukulungisa utshintsho oluncinci lokulungelelanisa ngokukhawuleza.
I-RKJD-350/250 i-Automatic V-Bottom Paper Bag Machine
Ububanzi besikhwama sephepha: 70-250mm / 70-350mm
Max.Isantya: 220-700pcs / min
Umatshini we-automatic paper bag ukuvelisa ubukhulu obuhlukeneyo beengxowa zephepha ze-V-bottom, iingxowa ezinefestile, iingxowa zokutya, iingxowa zeziqhamo ezomisiweyo kunye nezinye iingxowa zephepha ezihambelana nokusingqongileyo.
Umqulu oSebenzayo ngokuPheleleyo weBag yePhepha lokuTya umatshini weZB460RS
Ububanzi boMqulu wePhepha 670-1470mm
I-Max.Iphepha leDayamitha yokuRola φ1200mm
I-Core Diameter φ76mm(3″)
Ukutyeba kwePhepha 90–170g/㎡
Ububanzi boMzimba weBag 240-460mm
Ubude beTubhu yePhepha(ubude obunqunyiweyo) 260-710mm
Ibhegi Ezantsi Ubungakanani 80-260mm
YT-220/360/450 SQUARE UMSHINI WEPHEPHA EMZANTSI